Zvizhinji pane Sheamus mu 'Teenage Mutant Ninja Turtles 2', Iyo Dombo inoona kufanana neUFC Superstar - Wwe
Zvizhinji pane Sheamus mu 'Teenage Mutant Ninja Turtles 2', Iyo Dombo inoona kufanana neUFC Superstar
Sheamus achange achitamba Rocksteady
Sezvambotaurwa, The Daily Mail yakatumira chinyorwa nhasi ine mafoto kubva kuseti ye Teenage Mutant Ninja Turtles 2 , iyo yakatanga kutora mafirimu muNew York. Sheamus achange achionekwa mumuvhi saRocksteady. Unogona kutarisa pikicha yeCeltic Warrior yakaiswa pano .
Nepo Sheamus asina kuratidza kubatanidzwa kwake muvhi, akaita tweet pikicha pazasi pake nenhengo dzakakandwa Gary Anthony Williams (uyo ari kutamba Bebop) naBrian Tee (uyo ari kutamba Shredder).
Husiku hwakanaka nevanhu vakanaka mukati #NYC @GaryAWilliams @brian_tee @mirellytaylor pic.twitter.com/4MbwFYXltX
? Sheamus (@WWESheamus) Chivabvu 28, 2015
Ndichiri kusimudzira San Andreas munguva pfupi yapfuura, iwe yaunogona kutarisa pamusoro, Dwayne 'The Rock' Johnson akabvunzwa nezve kusimuka kweUFC superstar Conor McGregor. Rock akataura nezveMcGregor achipikisa Jose Aldo kumakwikwi eUFC featherweight kuUFC 189, uye akataura nezvekuti McGregor akamuyeuchidza sei nezvake kumashure muzuva.
Onawo: Awesome Conor McGregor - Jose Aldo UFC 189 Trailer
'Chandinoda pamusoro peConor ndicho chinhu chimwe chete chandinoda, nenzira, nezveAldo, naAldo pane kuvimba kwakanyarara uye naConor kuvimba kwacho hakuna kunyarara. Zvinondiyeuchidza nezvekuti ndaive sei muWWE, 'akadaro Johnson. 'Ini ndaive ndakashinga uye ndichitaura s-t, uye pakanga pasina chinhu chandisingataure. Zviripachena muWWE ibasa uye harisi chairo uye taiziva kuti ndiani achakunda nekukundwa, asi ini ndaizoita zvese zvandaigona maererano nezvandaigona kuita kuti ndive nechido. Conor murume akangwara akadaro. Anogadzira kufarira kukuru. Asi hazvisi, nenzira, nzombe - t. Anotsigira. '
murume wangu haachandidi
murume anoda mukadzi wake
murume wangu ane udyire here kana kuti ndini
sei kufara usina kuroorwa mushure mekurambana
handina zvandinofarira kana zvido
isu tine mhosva yezviito zvedu